Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. बोर्ड अध्यक्षका लागि शिव श्रेष्ठको नाम चर्चामा – Emountain TV
काठमाडौं, २७ असार । निकिता पौडेलको नियुक्ति वर्तमान सरकारले बदर गरेपछि फेरि एकपटक चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षका लागि काउन्टडाउन सुरु भएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीसँग निकट विभिन्न चलचित्रकर्मीले आफ्नो नाम सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाइरहेका छन् ।
केही दिनदेखि बोर्ड अध्यक्षका लागि दुई व्यक्तिको नाम खुबै चर्चामा थियो- दिनेश डिसी र केशव भट्टराई । निर्देशक डिसीलाई बोर्ड अध्यक्ष बनाउनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयमले चासो देखाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको राजकिय भारत भ्रमण टोलीमा राजेश हमालसँगै उनी पनि थिए । तर, रेडियो कान्तिपुरको स्टेशन म्यानेजरको पदबाट हट्न नसक्ने फिल्मीखबरसँगको कुराकानी पश्चात् केशवलाई बोर्ड अध्यक्षका लागि एक्ला दावेदार मानिएको थियो ।
तर, यसमा नयाँ ट्विस्ट आउने भएको छ । गोप्य सुत्रका अनुसार, चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा पुराना अभिनेता शिव श्रेष्ठ हुनसक्ने प्रवल सम्भावना रहेको छ । बाहिरी रुपमा बोर्ड अध्यक्षका लागि ‘प्रोसेस’ गरेको नबताएपनि केही दिनदेखि उनी मन्त्रालयको चक्कर काटिरहेका छन् ।
मंगलवार निर्देशक डिसीसँग शिवले काठमाडौंको पाँचतारे होटल सोल्टीमा घण्टौं यसै विषयमा छलफल गरेको खबर प्राप्त छ । शिवले प्रधानमन्त्री समक्ष बोर्ड अध्यक्षका लागि आफ्नो नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेको बुझिएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओली पनि शिवलाई बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । उता, बोर्ड अध्यक्षका लागि चर्चामा रहेका केशव भट्टराईको नाम चार महिना अगाडि नै जनपक्षीय चलचित्रकर्मी संघले मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ ।
अभिनेता द्वय श्रेष्ठ र भट्टराईमध्ये बोर्ड अध्यक्षमा को नियुक्त होला ? वा, फेरि यो कथामा नयाँ ट्विस्ट पो आउला कि ? मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले नै अब यसको चिरफार गर्नेछ । राजनीतिक नियुक्ति हुने चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षको कार्यकाल २ वर्षको हुन्छ ।